महामारीको समयमा भ्रामक सूचना र समाचारहरूबाट कसरी बच्ने ?
बैशाख २७, २०७८ ०९:३३ मा प्रकाशित
कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को दोस्रो लहरसँगै विश्व फेरी कोरोनासँग अर्को लडाई लडिरहेको छ । कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म विश्वमा करिव १५ करोड ७९ हजारबढी मानिस संक्रमित भैसकेका छन् भने ३२ लाख बढी संक्रमितको मृत्यु भैसकेको छ ।
नेपालको तथ्यांक हेर्दा ३ लाख ९४ हजार बढी संक्रमित भैसकेका छन् भने ३७ सय भन्दाबढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कोरोना भाइरसबाट आफु र आफ्ना परिवारलाई जोगाउन संसारभरका मानिसहरूले आआफ्नो पहुँचका आधारमा सूचनाहरु संकलन गर्ने र सोहि सूचनाको आधारमा आवश्यक सावधानीहरू अपनाइरहेका हुन्छन् ।
अहिले सामाजिक संजालमा बिभिन्न खालका सूचनाहरु सेयर भैरहेका छन् ति मध्ये निकै कम सूचना तथा जानकारीहरु हाम्रा लागि लाभदायक हुन्छन् । केहि दिन अगाडी मात्र होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरुले के के औषधि खानुपर्छ भनेर बनाइएको औषधिको एउटा लिस्ट भाइरल भयो, त्यसको भोलि पल्ट फेरी यी सबै औषधिहरु हाम्रो लागि उपयुक्त हुदैन हामीले यो यो मात्रै खानुपर्छ भनेर अर्को लिस्ट भाइरल भयो, यस्तो अवस्थामा आम जनताले कसको कुरा पत्याउने ?
यस्तो अवस्थामा आम जनताहरु गलत सूचनाको शिकार र सहि सूचनाबाट बन्चित हुने गरेका छन् । महामारीको यो अवस्थामा विश्वका धेरै जसो मानिस गलत सूचना तथा समाचारहरुको शिकारमा परिरहेका हुन्छन् । संकटको समयमा सामाजिक संजालको दुरुपयोग गर्दै दुनियाभर गलत सूचनाहरु फैलिने गरेका छन् । भ्रामक सूचना र गलत जानकारीका कारण झनै जोखिमको सृजना भएका पनि छन् ।
अहिले धेरै मानिसहरु सामाजिक संजालमा सक्रिय छन् । उनीहरुले सहि सूचनाभन्दा पनि तडक भडक शीर्षकका सूचना तथा समाचारहरु शेयर गरिरहेका हुन्छन । यूट्युव,सञ्चारमाध्यमहरुले भिउज र सेयर बढाउन शीर्षकलाई निकै सेन्सटाइज बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा गलत र भ्रामक सूचनाबाट बच्न जरुरी छ । भपर्दाे र विश्वसनिय सञ्चारमाध्यमको समाचारमा मात्रै भर पर्नुपर्छ ।
कोरोना भाइरस र यसबाट कसरी बच्ने भन्ने बारेमा धेरैले बिभिन्न खालका सूचना आदानप्रदान गरिरहेको भएपनि ती मध्ये केहि मात्र उपयोगी र भरपर्दा हुन्छन त्यसैले हामीले जहिले पनि आधिकारिक सुचना र जानकारी मात्रै लिनुपर्छ । सहि सूचना तथा जानकारीका लागि नेपाल सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ जस्ता संस्थाहरुले जारी गरेका सूचनाहरु पनि हामीले हेर्न सक्छौं ।
हामी कोहि न कोहि स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा हुन्छौ, सहि सूचनाको लागि हामीले उहाँहरुको सहायता लिन पनि सक्छौ । यदि हामि कोहि पनि स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा छैनौ भने हरेक पालिकामा स्वास्थ्य शाखा हुन्छ, हामीले त्यस स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाइ अथवा वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्पर्क गरेर पनि सहि सूचनाहरु लिन सक्छौ । याद राखौ सहि सूचना नै सहि समाधान हो त्यसैले गलत र भ्रामक सुचना र समाचारबाट आफुलाई टाढै राखौं ।
(लेखक, भक्तपुरस्थित गुण्डु स्वास्थ्य चौकीका जनस्वास्थ्य निरीक्षक हुनुन्छ ।)